1.7 iPhone 7 ma ọ bụ iPhone 6s (Plus)?
iPhone 6s (Plus) Images: a na ihe iPhone 6s (Plus) ga-ele anya Dị?
Na iPhone 6s (Plus) 's igba egbe na-abịa elu na September 9 2015, a otutu arụmụka e ebe maka ihe ga-iPhone 6s (Plus) n'ezie anya dị ka. Ịbụ maara nke eziokwu ahụ bụ na apple agbanwe imewe n'ihi na ya ọkaibe iPhones 3 ọ bụla afọ, iPhone 6s (Plus) / 6s / 6s gbakwunyere ma ọ bụ ihe ọ bụla folks ga na-akpọ ya na-adị, otu onye ga-nti banyere eziokwu na e nwere ga-abụ ihe ọ bụla isi imewe mgbanwe na kama ọ ga-abụ ihe na incremental kwalite ka ẹdude iPhone 6.
iPhone 6s (Plus) - bezel obere echiche.
Ọ ga-abụ oké ihe ijuanya n'ihi na anyị ma ọ bụrụ apple kpebie ebughibu ala ya iPhone ná mgbalị inupụ ókè nke ọhụrụ. Otu onye dị otú mgbalị na-agụnye iPhone 6s (Plus) ịbụ bezel na-erughị.
Bezels bụ ọrụ jide igwe ngosi ihuenyo na ebe. Ọ bụrụ na ego n'anya wepụrụ na ekwentị bụ ihe niile na-ihuenyo ekwentị, Ohere inweta bụ ọ ga-abụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ siri na mfe imebi, nke onye ọ bụla nke ọrụ chọrọ ruo mgbe na ọ gwụla ma onye achọghị ya ekwentị na-na ezi udi.
Ihe ndị na-ekwu
"Anyị ahụwo a mmekọrịta dị n'etiti ngwaọrụ na mkpa bezels - Ha niile na-adịghị ike."
"Olee otú a taa ekwentị na-atụ anya na-a iche iche mmasị ekwentị? M taa, ndị mmadụ na-adịghị amasị m. "
"Echere m na bezel-free ngosipụta bụ jọgburu onwe m na-eche na Apple dịghị mgbe ọ ga ịmụta nke a echiche ... na banyere iko na akụkụ nsoroụzọ ala na n'akụkụ, nke ahụ bụ a jọgburu onwe echiche kwa na Apple ga-mgbe ọ bụla ime na ..." - Jeffery
Comments enwetara site na amaonye isi mmalite na internet.
iPhone 6s (Plus) - Series 7000 Aluminium alloy.
Images nke ihe a na-ekwu na-iPhone 6s e leaked ka 9to5Mac na n'oge July, na-egosi esịtidem na mpụga echiche ọlaọcha metal casing, nke anya yiri nnọọ ka anodised aluminum eji na iPhone 6. Otú ọ dị, eziokwu nke a pụrụ ịbụ Series 7000 aluminum alloy eji maka Apple Watch Sport - a ọhụrụ ike mejupụtara enye mma ujo absorbance na anwụ ngwa ngwa maka handset.
"M na-atụ anya ihe a na-adịghị ehulata dị ka ya ụzọ meere m" -Danish Irfan.
"Gịnị bụ ọzọ? Isi na-eme ka nke carbon eriri? "
iPhone 6s (Plus) - ihuenyo Size.
Apple ịchịisi nke otu aka usabilty bụ ihe iphones dabeere na. Ọ dịghị ihe ga-aka mma na-eche karịa a ekwentị nke dị ala na n'ụzọ kwesịrị ekwesị gripped dị n'ọbụ isi anyị n'aka.
The iPhone 6s (Plus) nụrụ kepu kepu na-agbaso otu dimmensions dị ka nke iPhone 6 na 6 gbakwunyere na ihuenyo size nke 5.5 sentimita asatọ na 4.7 sentimita asatọ karị.
"E-anụ banyere ibu na ihuenyo iPhones ebe 2010. Ọ dịghị ihe merenụ nnọọ.
Ma, afọ a ... Anyị nwere ike na-atụ anya a mgbanwe! 70% ohere s n'ebe ... "-FrankJL
iPhone 6s (Plus) - Wuru na aka id na ihuenyo.
Sonovation mara ọkwa na Tuesday na ọ nwere ike itinye ultrasonic biometric sensọ n'okpuru a ozodimgba Glass ngosi, na ngwaọrụ ka ga na-agụ onye ọrụ fingerprints. Nke a ga-enyere ndị n'ụlọ button rapaara na iPhones aghụghọ site nnọọ ná mmalite ga-ehichapụ na ya mere enye ọhụrụ anya dum echiche.
"The incorporation wuru na aka id na ihuenyo ya onwe ya bụ a mma ọhụrụ ẹdude mkpịsị aka ebipụta nyocha ke ufọk bọtịnụ nke ada ada na ụfọdụ mgbe nke oge" - Debabrata Ponda
iPhone 6s (Plus) - Force aka mma.
The Taptic Engine na Force Touch si ọhụrụ MacBook na Apple Watch na-nụrụ kepu kepu na-eme ihe anya na ọhụrụ iPhone, na-enye ọrụ ọhụrụ ụzọ nke mmekọrịta na ha handset. Force Touch achọpụta otú ike onye ọrụ bụ ịpị na-enye ohere dị iche iche omume rụrụ ya. Pịa ngwa-ngwa-atụ bọtịnụ na a video ọkpụkpọ, na i nwere ike ịdị iche iche ọsọ na nke ọ skips site na ịpị Mkpa ọkụ ma ọ bụ ike, maka ihe atụ.
"Na-ezisa elu ọhụrụ atụmatụ dị mma, ma ha kwesịrị ịrụ ọma nakwa ma na-akwado ndụ batrị nke handset nakwa" - Sudhakar Reddy M.
Ụwa nke akụkọ ifo bụ mgbe niile ọzọ Ukwu karịa eziokwu. A mmebe aha ya bụ Vuk Nemanja Zoraja, gosiri anya ihe ọ ga-amasị iPhones anya dị ka n'ọdịnihu. The echiche oyiyi gosipụ a pụtara bezel-na ebughibu iPhone 6s (Plus), nke na-abịa na ihe na-akpali smart cover iji chebe ngosi.
iPhone ọrụ mgbe niile nwere ike oge na-echebe ha na ekwentị meziri si scratches na oge izu. The smart cover kwesịrị ala nke na isi ọwụwa na ka iPhone ọrụ enwe a ọzọ ọṅụ ahụmahụ na ha igwe.
"The smart cover bụ mkpa maka ihe niile iPhone ọrụ. M na-achọ ya na-akawanye maka gara aga nsụgharị nke iPhone dị ka nke ọma! ' -Priyanka Chawdoury.
"The ekwentị ekwesịghị itu ọzọ ruru ka cover ma ọ bụ ọzọ, ọ ga-adị gị ka iPhone ọzọ" - Varun Sharma.
"Olee banyere mkpisiaka àmà? Nke ahụ bụ ihe m chọrọ. My Iphone 5 anya dị ka a 3 afọ ngwaọrụ n'ihi niile fingerprints. "-Sean Clark
iPhone 6s (Plus) - Digital okpueze.
Esonụ ga iPhone egwuregwu a dijitalụ okpueze dị ka na apple-ekiri? Fọrọ nke nta maa bụghị. Dị ka ihe pụrụ iche dị ka echiche bụ, ọ bụ uru iji wụnye a dijitalụ okpueze. M na uche dijitalụ ya anya ka a zit njikere-akọ ha ọkọ.
"Ọ dịghị mkpa ka a dijitalụ okpueze. Ihe ikpeazụ anyị niile chọrọ bụ a 5 anụ ọhịa ahụ nnukwu nche nọ ọdụ anyị eri ego nke na-efu ihe karịrị 50K "-Jonathan
"Ọ ga-emebi anya nke ekwentị. Jụrụ! "- Imu Gupta
"M na-eji ihe iPhone ndụ m nile na m kpam kpam iguzogide echiche a." -Ellie Ebrahim.
iPhone 6s (Plus) - Rose gold hue.
Na mgbakwunye na ẹdude agba maka iPhone 6 nke na-agụnye Gold, Silver, Space Grey na-acha ọcha, na iPhone 6s (Plus) nụrụ kepu kepu na pụta na a ọhụrụ dịgasị iche iche nke agba, ya bụ na "Rose gold hue". A na agba ga-adọrọ mmasị n'ihi na ndị inyom niile si n'ebe ndị chọrọ ihe dị nnọọ ka kenha ha attire.
"Ịhụnanya ọhụrụ ngwakọta nke agba!" - Ankita Thakral
"Wont n'uche jazzing m elu attire dị nnọọ ka dakọtara persona nke ekwentị." - Sumanna Sree.
"M na-achọ iPhone enye ihe dịgasị iche iche nke nhọrọ na okwu nke agba ma ọ bụ na-ewetara n'elu ihe dị ka Moto onye." - Swasti Sharma.
Nghoputa: Kedu onye pụrụ ịbụ n'ezie?
Na a ngwa nnyocha e mere n'etiti ndị mmadụ gburugburu m, ndị mmadụ tozuru oke megide echiche nke ndị bezel free ekwentị na amara maka wuru na aka id ngosi.
The rose gold hue bụ a ndị mmadụ si mmasị na e kweere na-a eziokwu na n'ọdịnihu dị nso. Kedu maka gị?
Olee otú Ịmata Ọdịiche iPhone 4 si iPhone 4S
> Resource> iPhone> iPhone 7 Images: Bụ ihe iPhone 7 ga-ele anya dị ka?